Chengeta $ 1000 paSole Fitness F80 Treadmill - Fitness Rebates
musha » Amazon » Chengeta $ 1000 paSole Fitness F80 Treadmill
Kubudirira Kwemagariro Kunopa Sande F80 Treadmill Kutengwa kubva Amazon
Sevha $ 1000 paSole Fitness F80 Treadmill - Mutengo Wokutanga weRauteng $ 2499.99
Yakatengeswa Iye zvino nokuda kweR $ 1499.99 chete !!
The NOKUDA ​​F80 treadmill inopa iyo indasitiri-inotungamira garandi uye inobata Cushion Flex Whisper Deck. Iri dhizaini rekuratidzira rinoratidzwa kudzikisa kukanganisa kwemajoini ako kusvika pa40% uchienzaniswa nekumhanya pane asphalt. Iyo Sole F80 yekutsikirira inoratidzira yakasimba, 3.5 inoenderera basa HP mota iyo inoburitsa inonetsa kumhanya kusvika ku12 MPH uye inosvika kusvika ku15%.
Nokuda kwekuwedzerwa zviri nyore uye kuti kana chikoro chisina kushandiswa, zvinyorwa zvepamusoro zvakagadzirwa nemapuranga nekuvhara panzvimbo. The Sole F80 inoratidzira zvirongwa zvitanhatu zvakafanogadzirirwa, maviri akajairika mapurogiramu ekurovedza muviri, & maviri mapurogiramu ekurova kwemoyo.
Chiratidziro chine mwenje cheLED chinosanganisira bhodhi remeseji yemirairo yakajeka uye mhinduro. Ruzivo rwunoratidzwa nguva dzese rwunosanganisira Speed, Incline, Nguva, Kureba Kufamba, MaCalori, Pulse uye Pace. Iko zvakare kune 1/4 maira track track uye Peak uye Valley girafu yezvirongwa zvakasiyana Iyo yega treadmill's console yakavaka mumatauri ayo anotendera iwe kuti ubatise chero MP3 player kuti uteerere kune yako yaunofarira playlist panguva yako yekurovedza muviri.
Folding Deck: Izvo zvakagadzirirwa zvinoshandiswa patentamende yose ye gear uye pinion system ine Safety Lock Deck iyo inovhara chigadziro panzvimbo iyo iyo treadmill iri panzvimbo yakarurama. IF80 inouyawo neAlex Assist Folding Deck Design, iyo inokubvumira kusunungura mbambo, nhanho kumashure, uye mbambo ichazvizarura pachedu paunenge uchiona.
Zviri nyore Kudzora: A streamlined control console inokurumidza kukurumidza uye inonongedza zvigadziridzo zvigadziri kumativi ose eLCD kuitira mu-kushandiswa kwekugadzirisa zviri nyore.
Cushion Flex Whisper Deck: Proprietary stealth teknolojia inopa kugadzikana, kunyarara kwekudzidzira paunenge uchideredza zvinokonzera kusvika ku40%.
Precision Welded Frame: Iyo yakagadzikana, yakasimba-yakagadzirirwa faira yakasimba zvakakwana kuti ishandise kushandiswa zvakashandiswa nevashandisi vezviremba zvose uye zvikomo.
NOKUDZIDZA LCD Ratidza: Girazi rebhuruu rine ruvara rukuru, ruzivo rwakachena runopa vashandisi nemashoko anobatsira, kusanganisira kutengesa kwemwoyo, kukurumidza, kufamba, makoriri akapiswa, uye mamwe mazano anobatsira evo.
Integrated Message Board: An alphanumeric text center inotumira kupupurira mharidzo kumushandi mukuedza kuvatungamira kuburikidza nemashoko ose ezvokuvhima. Izwi bhodhi richadzokorora zvakare basa rako rose shure kwekupedzisa, saka unogona kuona kufambira mberi kwako.
High Torque Motor neFlywheels: Zvose zvinyorwa zveTLELE zvinosanganisira chakanyanya basa chechitisi uye motokari mukirasi yavo. Zvimwe zvinosanganisira mapepa-akavharwa, mashizha ese-mashizha akachengetedzwa uye zvinorema basa rakasimbiswa, zvigadzirwa zvemabhizimisi zvakakura nemheta yakakura, yose-yesimbi zinc yakavhurwa mafirwheels akaenzana kwekudzivirira-kusachengeteka kuchengetedza kushanda / kufamba kwepasi.
Vashandi: 2.75-inch rollers vane chisimbiso chakavharidzirwa uye michina yemhangura yemhangura yega roga roga roga kuderedza static. Mabhanhire makuru anogadzira hurukuro yakakura pamusoro pebhanhire uye kwenguva refu yakareba uye bhandi hupenyu.
Mabheti: Yakasungirirwa mabhandi maviri-ply ane mavara mana, kusanganisira maviri mabheti emabharuri pamusoro pepakati pePVC mashizha ane nylonsi inotsigira iyo inofamba pamusoro pegadziri uye gorosi. Iyo rubha inopa dura, iyo PVC inomisa bhanhire kubva pamusoro-kutambanudza, uye nylon inopa nzvimbo yakanyorova, yakasununguka-isina mahwindo kuti igadzike pamusoro pegwenga uye gorosi.
Mienzaniso 35 ne 58 ne 80 inches (W x H x D)
Deck miviri 35 ne 80 inches (W x D)
Running surface zviyero 22 ne 60 inches (W x D)
375-pound kuyerwa kwemiganhu
Kudzora & Zvimiro
3.5 CHP, DC Tsika motokari
0.5-ku-12 MPH speed range
0-ku-15% rack-uye-pinion gear design inotamira
Pulse grip uye chifuva chepfungwa chekutsvaga kwepfungwa
Six standard standard programs
Makomborero maviri maitiro
Mwoyo mapurogiramu maviri
Warranties Ichi chidimbu chemidziyo yeSOLE inosanganisira anotevera mawaranti ekugadzira pamusoro pehurema hwezvinhu uye kugadzirwa.
Chigadziko, motokari, uye mbambo: Lifetime
Electronics: Makore mashanu
Basa: Makore maviri
Click Here Kutenga iyo Sole Fitness F80 Folding Treadmill kubva kuAmazon
* Price of $ 1499.99 yeSole F80 inofanirwa seyakafanana ne8 / 29 / 13 4: 21 PM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa pa Amazon.com panguva yekutenga ichashandiswa pakutenga chigadzirwa ichi
August 29, 2013 FitnessRebates Amazon, zuva, Treadmills 1 Comment	$ 1000 kunze kweSole Treadmill, Sale Sole Treadmills, Sole F80, Sole F80 Folding Treadmill
Imwe pfungwa ya “Chengeta $ 1000 paSole Fitness F80 Treadmill"
syed kazmi anoti:
November 3, 2016 pana 3: 29 pm
ndinoda chete f80 treadmill